अण्डाको उत्पादन लागतभन्दा विक्रीमूल्य कम
काठमाडौं । नेपाल अण्डा उत्पादक संघको पहल र पशुसेवा विभागको संयोजकत्वमा माउन्ट डिजिट टेक्नोलोजी प्रालिले अण्डा उत्पादनको लागतमूल्य तथा बजारीकरण सम्बन्धमा गरेको अध्ययनले अण्डाको उत्पादन लागतभन्दा विक्रीमूल्य कम भएको देखाएको छ । उक्त अध्ययनका अनुसार प्रतिअण्डाको उत्पादन लागतमूल्य रू. १२ हुँदा विक्रीमूल्य रू. ९ रहेको छ । उक्त अध्ययन गत मंसिर २४ देखि पुस १० गते सम्मको अवधिमा गरिएको थियो ।
उत्पादकले सस्तोमा अण्डा बेच्नुपरेको बताइरहँदा उपभोक्ताले भने त्योभन्दा निकै बढी मूल्यमा अण्डा खरीद गर्नुपरेको छ । भारतमा भन्दा नेपालमा महँगोमा अण्डा विक्री भइरहेको देखिन्छ । भारतको राष्ट्रिय अण्डा समन्वय समितिले त्यहाँ अण्डाको अधिकतम मूल्य ५ रुपैयाँ रहेको बताएको छ । उत्पादकले ९ रुपैयाँ विक्री मूल्य भने पनि उपभोक्ताले भने १३ रुपैयाँ तिर्नुपरिरहेको छ । उत्पादकका अनुसार विक्रीको चरण धेरै भएकाले किसानसम्म उपभोक्ताले तिर्ने रकम पुग्दैन ।
बुधवार ललितपुरस्थित पशुसेवा विभागमा अण्डा उत्पादनको लागत मूल्य तथा बजारीकरण अध्ययन सम्बन्धमा आयोजना गरिएको पत्रकार सम्मेलनमा विभागले यस्तो जानकारी गराएको हो । पत्रकार सम्मेलनमा विभागका महानिर्देशक वंशी शर्माले यसअघि अण्डाको परलमूल्य निर्धारण गर्र्नेे कमिटी नबनेको बताए । हाल अण्डा व्यवसायी संघको पहलमा गरिएको अध्ययनबाट यसबारेको रिर्पोट आइसकेको बताउँदै उनले भने, ‘अब कुखुराको मासुको मूल्य र अण्डाको मूल्य निर्धारणका लागि यसैलाई आधार मूल्य बनाएर त्योभन्दा कम हुन नदिन प्रवद्र्धनात्मक कार्यक्रम ल्याउँछौं ।’
नेपाल अण्डा उत्पादक संघका अध्यक्ष शिवराम केसीका अनुसार अध्ययनले अण्डा उत्पादक किसानको वास्तविक अवस्था के छ भन्ने प्रस्ट पारेको छ । सरकारले बनाएका ९० प्रतिशत नीतिनियम किसानको हितमा नहुँदा उत्पादन लागतभन्दा सस्तोमा आफ्नो उत्पादन बेच्नुपर्ने अवस्था आएको उनले दाबी गरे । यसै कारण किसान निकै मारमा रहेकाले लागत मूल्य घटाउन सरकारले नीतिगत व्यवस्था गर्नुपर्ने र किसानले आफ्नो लागत पाउनुपर्ने उनले बताए ।
अध्ययनमा संलग्न पूर्वसहसचिव डा. अमर शाहका अनुसार ३ वर्षको अवधिमा कुखुराको दानाको मूल्य ४० प्रतिशतले वृद्धि हुँदा अण्डाको मूल्य २० प्रतिशतले घटेको पाइएको छ । दानाको लागि कच्चा पदार्थ अन्य मुलुकबाट आयात गर्नुपर्ने हुँदा यसको मूल्य बढेको हो । बजारको मागभन्दा बढी अण्डा उत्पादन हुँदा प्रतिस्पर्धा भई मूल्य कम हुने उनले बताए । नेपाल कुखुराको मासु र अण्डा उत्पादनमा आत्मनिर्भर छ । हाल वार्षिक करीब १ अर्ब ५० करोड गोटा अण्डा उत्पादन हुन्छ । यति हँदाहुँदै पनि मूल्यको अनिश्चितता तथा अण्डाको मूल्य निर्धारण प्रणालीको अनुपस्थिति जस्ता चुनौती कुखुरापालक किसानले भोग्नु परिरहेको छ ।